Zinc emhlophe - kukhona zombala wezinto esekelwe zinc oxide, okuyinto lihambisana binders ehlukahlukene (iphele uwoyela, uwoyela zemifino) ukwakha upende omhlophe. Bambalwa abantu bazi mayelana nezici kanye nezici zinc oxide, sibusekela esihlokweni sizodingida le ndaba.
Ngesimo okumsulwa, umkhiqizo ine ezimhlophe ngokuphelele nge Tint kancane bluish. White ayinaphunga futhi kungenziwa exutshwe kahle nge isixazululo aqueous alikhali kanye ammonia. Abanaso sokudiliza futhi musa deform bedle nezilwanyana ezincane namagciwane. Ngoba bayakwazi ukuncela umswakama, kufanele agcinwe izigubhu avaliwe.
On the izakhiwo ezinhle futhi zifaka izimo ezifana nalezi:
Oluvumelana nge zonke izinhlobo upende;
Noma kunjalo, they possess izakhiwo engalunganga, njalo zihlanganisa ngokuhlaziya, Ukusabalala abampofu ikhono lokwamukela esiningi uwoyela.
Kodwa lapho lisetshenziswa enkulumweni art izakhiwo ezinjalo whiting njengoba brittleness kanye nekhono ukumboza izikhala, kuholele Yisiphi isibonelo ebhaliwe nokusetshenziswa kwawo, akunakwenzeka phinda. Futhi kudingeka ukuqapha isimo esishubile ngendwangu, eshintsha ne okwandisa nomswakama. Nge kokucindezelwa akhe amhlophe noma ukungezwani kungenzeka sidilike.
Izinhlobo zinc oxide
zinc ngomcako zihlukaniswe izinhlobo ezimbili: BTS0 futhi BC1.
Imikhiqizo imbozwe uphawu BTS0, asetshenziswe ekukhiqizeni upende, lesikhumba yokufakelwa kanye nemikhiqizo zenjoloba. Futhi, ke yengezwe Abrasives usimende ukwakhiwa ngoba amazinyo.
White BC1 womkhiqizo ikakhulukazi esetshenziselwa womshini asbestos-usimende nopende, ezisetshenziswa for zangaphakathi nezangaphandle umhlobiso izakhiwo, okungenani - ukwenziwa lesikhumba yokufakelwa kanye iraba kuphela.
Ngaphezu kwalokho, kunezinye izindawo lapho zinc ezimhlophe esetshenziswa. isicelo sabo imithi. Le miyalezo ingenye yezingxenye of yokugcoba ezithile isinqandakuvunda futhi izimpushana. Asetshenziswa womshini zepulasitiki, iraba, iphepha kanye namabhodlela.
Endaweni ehlukile, zinc ezimhlophe ungabahlukanisa (upende omhlophe) oluqanjwe ngesisekelo zinc oxide grade A. upende ihlukaniswe izinhlobo eziningana, eyenzelwe izicelo ongaphandle kanye zasendlini. Phakathi lokhu uhlobo upende ngokuvamile kakhulu umhlobiso ingaphakathi esetshenziswa ezimhlophe zinc MA 22, izimpawu ukusebenza high nokuphepha umlilo ngcono.
Ngaphezu kwalokho namuhla zinc oxide kwenza ukwakhiwa anticorrosion upende. White ukungezwa ku izingoma fillers kanye anamathelayo ahlukahlukene, futhi esetshenziswa enkulu ekwakhekeni izitsha zobumba.
It is ukwazi ukuthi ngesikhathi ukulungisa zinc ezimhlophe, uwoyela linseed buhlanjululwe ukuba ukungaguquguquki upende, kungase kube elifakwe imicu nelineni, ezisetshenziswa njengoba seal threaded amapayipi amanzi axhunywe ngamapayipi.
Ukuze imidwebo ukukhiqiza okumsulwa zinc oxide, ehlanganisa izinhlayiya emihle kakhulu zinc oxide, eliqukethe akukho iminonjana zensimbi oxides phambili. Basuke ayevumela futhi ithoni abandayo kuhluke phezu ifomu lesicelo ifilimu inelastic. Zisetshenziswa zonke izinhlobo zobuciko, njengoba nje kuvamile namanje ukumelana kakhulu sombala ukukhanya, engesiyo ishintshe, ngisho nalabo uyinki aqukethe nesibabule. Ayevame amakhorali vermilion ne-cadmium kungezwe ukuze ekuthuthukiseni izinga layo.
Amafutha zinc mhlophe
Lo mkhiqizo oxide zinc ukuthi kusulwe noma uwoyela linseed. Basuke uvame ukubizwa ngokuthi amafutha kanye okokuvikela metal izakhiwo kusuka ukugqwala, futhi for imibala ukhuni usimende evele. Zingamashumi ezifanele ukusetshenziswa Ingaphakathi nengaphandle.
Zinc uwoyela ezimhlophe zinamandla okuhle yokucasha, okungukuthi, lapho isetshenziswa ebusweni zingabantu ukufihla ngokuphelele umbala enamathela ngaphambili isicelo. Ngaphezu kwalokho, ngemva lokunameka bewakha ukugqwala enamathela ukumelana nge high umswakama ukumelana naso futhi kwenze permeability ububi ngentukuthelo.
Zinc ezimhlophe isetshenziselwa enamathela usimende, metal kanye evele lokhuni.
Imisebenzi ezivezwa egqoke amagilavu iraba, futhi ngesikhathi ekusetshenzisweni kwazo futhi ngemuva kokuphela egumbini kubalulekile pholisa.
Ngaphambi kokuqhubeka ne upende, ngomcako, uma gustotertyh powder alulaze uwoyela wemvelo omiswe, iphesenti okufanele 18-25% we mass ingqikithi mhlophe futhi kakhulu ngokuphelele edidayo. Uma kuwukuthi uwoyela upende ke uma kunesidingo ke engeza umoya omhlophe noma turpentine.
Ebusweni kufanele kube pre-ukulungiselela:
kuqala it is bahlanza of ukungcola, amafutha, uthuli, upende omdala (uma kudingeka). Lokhu kwenziwa nge spatula;
ke Putty imifantu usithe nemifantu;
Ngemva kwalo seyomile surface ukusebenza iphucuziwe usebenzisa lokukhuhla;
is zizosetshenziswa primer;
Ngemva primer bomile uqhubekele umbala.
Ukuze banciphise ukusetshenziswa lomthofu ezimhlophe, uwoyela linseed Kunconywa ukuba beyomboza.
White sisetshenziswa ku surface bushelelezi ezomile kusetshenziswa ibhulashi upende , fafaza isibhamu noma roller:
ibhulashi esetshenziselwa ukudaya izakhi esihle kanye evele elincane;
ngoba Ukusabalala endaweni enkulu usebenzisa ibhulashi noma roller;
iyashelela Umdwebo inqubo sidlula isibhamu spray. Le ndlela yenza kube lula ukudala i ngisho ungqimba futhi aphathe ezindaweni ezingafinyeleleki.
Isibalo izingqimba kungenzeka 1 noma 2 kuye elamukelekile. ugqinsi ngalunye ngokuvamile bome amahora uma izinga lokushisa Igumbi akuyona ngaphansana + 20º C. Ukusetshenziswa ezimhlophe ngamunye ungqimba imayelana 170-200 g ngalinye 1 sq. m.
ongakhetha ezihlukahlukene ezisetshenziswa uma upakisha. Zinc oxide kungenziwa zahlanganiswa ngo izikhwama (plastic noma iphepha), zeplastiki noma imigqomo sokhuni, amakhadibhodi, ipulangwe noma esitsheni ngobuningi nge liner eyenziwe polyethylene, iphepha noma polyethylene izikhwama, kanye iziqukathi ekhethekile ezithambile zalutho.
Ezokuthutha kanye nokugcina impahla
umkhiqizo Ezokuthutha evunyelwe zonke izinhlobo ezokuthutha ezimboziwe, ngaphandle yenziwa kuphela ezimhlophe, igcwele izigubhu ezithambile ekhethekile - bangathumela uyiswe ezimotweni ovulekile futhi ukugcina ngaphandle.
Kepha-zinc oxide, zahlanganiswa ngo nezinye emabhokisini bayakushiswa egcinwe emafektri avaliwe, enamazinga okushisa ezisukela -40 ° C kuya 40 ° C. Basuke ezibekwe lokhuni Pallets izitaki engafika ku-3 m ukuphakama.
Impilo - 1 unyaka.
Ukulungisa egumbini lokugezela ngezandla zabo. Indlela ukuhlangabezana ibhajethi yakho?
Indlela ukukhetha glue kuya plastic
Fireplaces: Izici Ukukhweza
Penda Corner: ngebuhle izinhlobo.
Isihlahla lobuhlalu. Holiday amasiko ngendlela incarnation entsha
INkosi uDodon. "I-Tale ye-Golden Cockerel", u-Alexander Sergeevich Pushkin
Salting iklabishi amabhange. zokupheka esihlwabusayo
Abadlali of the ifilimu "Fool": Artyom Bystrov, Natalia Surkov, Yuri Tsurilo, uBoris Nevzorov
Foot Massager "Bliss" uzoletha ubumbano futhi unciphise ukukhathala
Idolobha lase-Ostrov (isifunda se-Pskov): umlando kanye nezinto zokubuka
Lesi sifo sibulale: umdlavuza inhliziyo